Warshadda Calaamadaha Sheetka A4 iyo soosaarayaasha | Fangda
Calaamadaha waraaqaha ayaa ah nooca calaamadaha warqadda daabacaadaha. Waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo inkjet-ka iyo daabacadaha leysarka. Waraaqaha xaashida waxay ku yimaadaan 8.5 x 11 size warqad ahaan cabir ahaan, iyo sidoo kale qaabab qaabeyn ballaaran ah: 8.5 ″ x 14 ″, 11 ″ x 17 ″, iyo 12 ″ x 18 ″.
Cabir: 8.5 x 11.75 “
Waxyaabaha: warqad caadi ah oo aan daboolneyn
Calaamadaha xaashi kasta: mid
Daabacaadda: midkoodna / calaamadda iftiinka ee dhabarka
Baakadaha: 1000 kumbiyuutar / kartoon
* FANGDA A4 summadda warqadda waxay ka sameysan tahay warqad, kuma jirto wax sun ah, waxay leedahay dareen jilicsan oo gacanta ah iyo muuqaal qurxoon.
* Daabacaad si cad
* Warqaddu waxay noqon kartaa midabo kala duwan sida caddaan, guduud, jaalle, casaan iwm.
* Waxay ku habboon tahay labada inkjet iyo daabacadaha leysarka.
* Sumadahayaga caadiga ah waxay ku yimaadaan qaabab leydi ah oo ku yaal xaashida A4, laakiin waxaan sidoo kale ku bixinnaa calaamado wareegsan iyo qaabab kale oo kala duwan oo ku habboon baahiyahaaga gaarka ah.
* Koollo xasaasi ah oo cadaadis leh (sidoo kale loo yaqaan PSA ama is-dhejin) ayaa lagu dabaqayaa cadaadis fudud oo aan firfircooneyn ama kuleyl lahayn. Calaamadaha PSA badanaa waxay leeyihiin khadadka sii-deynta kuwaas oo ilaaliya xarkaha iyo caawinta la-qabashada sumadda.
Faa'iidooyinka warqadda A4:
* Aqoonsiga badeecada, sida faylasha galka tabta. Macluumaadka qaar ee ku qoran calaamadda waxaa ku jiri kara magaca, waxyaabaha ku jira, iyo taariikhda la bilaabay.
* Ku habboonaanta qaybinta
* Jaangoyn iyo Isticmaal fudud
* Saadka iyo rarka, tusaalooyinka waa calaamadaha cinwaanka, calaamadaha sanduuqa iyo calaamadaha sariirtaada.
* Dib loo cusboonaysiin karo
* Qaaciddada kulul ee dhalaalida kulul (oo leh shahaado patent)
* R&D adag oo leh 8 shatiyadeed.
* U qalma REACH iyo heerka ISO.
* Isdhexgalka Vertical: dhalaalka kulul samaynta koolo iyo daahan, daabacaadda, dhinto cut dhammaan geeddi-socodka lagu dhammeeyay in aqoon isweydaarsiyo u gaar ah.
* Tayada gaarsiinta iyo isku halaynta oo leh qiimaha ugu tartan badan.
* In ka badan 20 sano ganacsiga dhoofinta iyo soo dejinta.
* Alaab-qeybiye shirkado xawli ku socda oo xawli ku socda oo 10 sano ka badan.
Hore: Baqshadda Liiska Baakadaha PE
Xiga: Boostada Xumbada Poly